သင့်ကိုမွန်းကြပ်စေတဲ့ Relationship ပြဿနာ ၉မျိုး | Buzzy
စိတ်ခံစားချက်ဆိုတာ ကိုယ်တွေဆက်ဆံနေရတဲ့လူမျိုးတွေပေါ်မှာလည်း မူတည်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ခိုင်မာတဲ့ Relationship ဆိုတာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်နားလည်မှုပေးပြီး လေးစားမှုရှိရပါတယ်။ မကြာခဏ ပြသနာတွေတက်၊စကားများနေတဲ့ဆက်ဆံရေးဟာ ရေရှည်ဆို ကိုယ့်ကိုပဲထိခိုက်စေပါတယ်။
စိတျခံစားခကျြဆိုတာ ကိုယျတှဆေကျဆံနရေတဲ့လူမြိုးတှပေျေါမှာလညျး မူတညျပါတယျ။ တကယျတော့ ခိုငျမာတဲ့ Relationship ဆိုတာ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျနားလညျမှုပေးပွီး လေးစားမှုရှိရပါတယျ။ မကွာခဏ ပွသနာတှတေကျ၊စကားမြားနတေဲ့ဆကျဆံရေးဟာ ရရှေညျဆို ကိုယျ့ကိုပဲထိခိုကျစပေါတယျ။
၁။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အပြင်သွားရင် မလွှတ်ဘူး
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့လည်း ကိုယ့်ချစ်သူက ဘေးကနေ အမြဲတမ်းတစ်ကောက်ကောက် လိုက်နေမယ်။အဲ့ဒါချစ်တယ်လို့ထင်ရပေမယ့် သတိပေးနေတဲ့လက္ခဏာပါ။ တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ့်ချစ်သူကို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အချိန်ပေးသင့်တယ်ဆိုတာ နားလည်သင့်ပါတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်နေရာပေးမှ ရေရှည်ခိုင်မြဲတဲ့ ဆက်ဆံရေးတစ်ခု ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါမယ်။
သူငယျခငျြးတှနေဲ့တှလေ့ညျး ကိုယျ့ခဈြသူက ဘေးကနေ အမွဲတမျးတဈကောကျကောကျ လိုကျနမေယျ။အဲ့ဒါခဈြတယျလို့ထငျရပမေယျ့ သတိပေးနတေဲ့လက်ခဏာပါ။ တဈခါတဈလေ ကိုယျ့ခဈြသူကို သူငယျခငျြးတှနေဲ့အခြိနျပေးသငျ့တယျဆိုတာ နားလညျသငျ့ပါတယျ။ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျနရောပေးမှ ရရှေညျခိုငျမွဲတဲ့ ဆကျဆံရေးတဈခု ပိုငျဆိုငျနိုငျပါမယျ။
၂။ ကိုယ့်ပိုက်ဆံကိုပါ စီမံလာမယ်
ယုံကြည်မှုထားဖို့ လိုပါတယ်။ဒါပေမယ့် အရင်ဆုံးတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပဲ ယုံကြည်မှုရှိအောင်နေပါ။ပိုက်ဆံတွေကို စီမံခန့်ခွဲတော့ မင်းတို့ဆက်ဆံရေးက ဘာဖြစ်သွားမှာလဲ ? အရှိန်အ၀ါလွှမ်းမိုးမှုဆိုတာ စီးပွားရေးအကြမ်းဖက်မှုကနေ လာတာပါ။စုံတွဲတွေအတွက်အတွေ့အကြုံနဲ့ကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေပဲ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မျှဝတာ ကောင်းပါတယ်။
ယုံကွညျမှုထားဖို့ လိုပါတယျ။ဒါပမေယျ့ အရငျဆုံးတော့ ကိုယျ့ကိုယျကိုပဲ ယုံကွညျမှုရှိအောငျနပေါ။ပိုကျဆံတှကေို စီမံခနျ့ခှဲတော့ မငျးတို့ဆကျဆံရေးက ဘာဖွဈသှားမှာလဲ ? အရှိနျအဝါလှမျးမိုးမှုဆိုတာ စီးပှားရေးအကွမျးဖကျမှုကနေ လာတာပါ။စုံတှဲတှအေတှကျအတှအေ့ကွုံနဲ့ကောငျးတဲ့ကိစ်စတှပေဲ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျမြှဝတာ ကောငျးပါတယျ။
၃။ ဖုန်းထဲက password တွေပေးထားခြင်း
e-mail နဲ့အခြား အချက်လက် password တွေပေးထားခြင်းက အချစ်ကိုသက်သေပြတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲ့ဒါ ဆက်ဆံရေးတစ်ခု အဖုအထစ်ဖြစ်စေမယ့် အစပျိုးမှုတွေပါပဲ။ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စတွေကို ခွဲခြားထားပါ။အထိန်းချုပ်မခံပါနဲ့။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ယုံကြည်မှုရှိမှ ခိုင်မာတဲ့ဆက်ဆံရေးတစ်ခုဖြစ်မှာပါ။
e-mail နဲ့အခွား အခကျြလကျ password တှပေေးထားခွငျးက အခဈြကိုသကျသပွေတာ မဟုတျပါဘူး။ အဲ့ဒါ ဆကျဆံရေးတဈခု အဖုအထဈဖွဈစမေယျ့ အစပြိုးမှုတှပေါပဲ။ကိုယျ့ခဈြသူနဲ့ ကိုယျရေးကိုယျတာကိစ်စတှကေို ခှဲခွားထားပါ။အထိနျးခြုပျမခံပါနဲ့။ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ ယုံကွညျမှုရှိမှ ခိုငျမာတဲ့ဆကျဆံရေးတဈခုဖွဈမှာပါ။
၄။ ဘယ်လိုဝတ်စားဖို့ ပြောမယ်
Relationship တည်မြဲဖို့ဆို အရင်ဆုံး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ချစ်ပြီး လေးစားပါ။ မင်း ချစ်သူက မင်းဝတ်စားပုံကို သဘောမကျဘူးလား ?အဲ့ဒါ သူတို့ဆုံးဖြတ်ပေးရမယ့် ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ဝတ်စားပုံက ကိုယ်နဲ့ပဲဆိုင်ပါတယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုရှိအောင် တည်ဆောက်ဖို့က ခက်ခဲပေမယ့် ဒီအချက်ဟာ ဆက်ဆံရေးတစ်ခုချောမွေ့အတွက် လိုအပ်ပါတယ်။
Relationship တညျမွဲဖို့ဆို အရငျဆုံး ကိုယျ့ကိုယျကိုယျခဈြပွီး လေးစားပါ။ မငျး ခဈြသူက မငျးဝတျစားပုံကို သဘောမကဘြူးလား ?အဲ့ဒါ သူတို့ဆုံးဖွတျပေးရမယျ့ ကိစ်စမဟုတျပါဘူး။ ကိုယျ့ဝတျစားပုံက ကိုယျနဲ့ပဲဆိုငျပါတယျ။ကိုယျ့ကိုယျကိုယျယုံကွညျမှုရှိအောငျ တညျဆောကျဖို့က ခကျခဲပမေယျ့ ဒီအခကျြဟာ ဆကျဆံရေးတဈခုခြောမှအေ့တှကျ လိုအပျပါတယျ။
ဒီအပြုအမူတွေက မင်းကိုစိတ်အနှောင့်ယှက်မဖြစ်ပါဘူးလို့ထင်ရင် ချစ်သူထားတယ်ဆိုတာ ကိုယ့်ရင်ထဲအေးချင်လို့ စိတ်ရှုပ်အောင်လုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးလို့ အကြံပေးပါရစေ။ ချစ်သူဆီက miss called တွေများ ၀င်နေမလားဆိုပြီး အချိန်တိုင်းစိုးရိမ်နေရမယ်ဆိုရင် တစ်ခုခုတော့မှားနေပြီနော်။
၆။ သူငယ်ချင်းအရင်းကြီးတွေနဲ့တောင် သ၀န်တိုမယ်
သ၀န်တိုတယ်ဆိုတာ ရောဂါတစ်မျိုး။အမှန်ပဲ တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ်တွေက အဲ့ဒါကိုဟာသလုပ်နေပေမယ့် ဟာသတွေကနေ အတည်ဖြစ်လာတတ်တယ်။ချစ်သူက ကိုယ့်ကိုမယုံကြည်ဘူးဆို ဘယ်တော့မှမတည်မြဲနိုင်ပါဘူး။
သဝနျတိုတယျဆိုတာ ရောဂါတဈမြိုး။အမှနျပဲ တဈခါတဈလေ ကိုယျတှကေ အဲ့ဒါကိုဟာသလုပျနပေမေယျ့ ဟာသတှကေနေ အတညျဖွဈလာတတျတယျ။ခဈြသူက ကိုယျ့ကိုမယုံကွညျဘူးဆို ဘယျတော့မှမတညျမွဲနိုငျပါဘူး။
၇။စိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်း ပြောဖို့ တွန့်ဆုတ်နေမယ်
ချစ်ရတာ ပျော်စရာကောင်းပါတယ်။ကြောက်နေရမှာ မဟုတ်ဘူး။ချစ်သူဆိုတာ ရင်ဖွင့်ဖော်လို့လည်း ပြောလို့ရပါတယ်။ ကိုယ်ကြောက်ရွံနေရမယ့် လူမဟုတ်ပါဘူး။
ခဈြရတာ ပြျောစရာကောငျးပါတယျ။ကွောကျနရေမှာ မဟုတျဘူး။ခဈြသူဆိုတာ ရငျဖှငျ့ဖျောလို့လညျး ပွောလို့ရပါတယျ။ ကိုယျကွောကျရှံနရေမယျ့ လူမဟုတျပါဘူး။
ဘာမဟုတ်တဲ့ပြဿနာလေးတွေတောင် ကိုယ့်ချစ်သူက လက်ပါနေပြီလား ... အဲ့လိုမျိုးအကျင့်တွေကို ခွင့်မပြုသင့်ပါဘူး။Relationship တစ်ခုမှာ ကိုယ့်အတွက်ကို သတ်မှတ်ချက်တွေထားသင့်တယ်။ ကိုယ့်ကို လက်ပါနေပြီဆိုသေချာစဉ်းစားပါတော့။ ကိုယ်က အဖိနှိပ်ခံမဟုတ်ဘူး။
၉။ သူငယ်ချင်းတွေ သတိပေးလာမယ်
သူတို့ပြောတာ နားထောင်လိုက်ပါ။အခြေအနေတစ်ခုကို မတူညီတဲ့ဘက်ပေါင်းစုံကနေ ကွဲပြားစွာ မြင်နိုင်ပါတယ်။ မိသားစု ဒါမှမဟုတ် သူငယ်ချင်းတွေမှာကောင်းမွန်တဲ့ အိုင်ဒီယာတွေရှိနေတတ်တယ်။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်အမြင်ကမတူဘူးလေ။ မင်းဝမ်းနည်းနေတာ၊တိတ်ဆိတ်နေတာကို ဘေးကလူတွေမြင်နေရပါတယ်။ မင်းသတိမထားမိတဲ့အရာကို သူတို့တွေမြင်ကောင်းမြင်နိုင်တယ်။
သူတို့ပွောတာ နားထောငျလိုကျပါ။အခွအေနတေဈခုကို မတူညီတဲ့ဘကျပေါငျးစုံကနေ ကှဲပွားစှာ မွငျနိုငျပါတယျ။ မိသားစု ဒါမှမဟုတျ သူငယျခငျြးတှမှောကောငျးမှနျတဲ့ အိုငျဒီယာတှရှေိနတေတျတယျ။ တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျအမွငျကမတူဘူးလေ။ မငျးဝမျးနညျးနတော၊တိတျဆိတျနတောကို ဘေးကလူတှမွေငျနရေပါတယျ။ မငျးသတိမထားမိတဲ့အရာကို သူတို့တှမွေငျကောငျးမွငျနိုငျတယျ။